I-ICC ithumele umyalezo ilahla ngecala owamavukelambuso eDRC | Bayede News
Home/ iBayede Kuleli Sonto/I-ICC ithumele umyalezo ilahla ngecala owamavukelambuso eDRC
Umholi wamavukelambuso uGermain Katanga kwelinye lamacala
INKANTOLO Yezamacala Obugebengu Emhlabeni i-International Criminal Court (ICC) iphinde yakhombisa amandla enawo kubaholi basemazweni ase-Afrika ngesikhathi ilahla ngecala owayehola umbutho wezempi wamavukelambuso eDemocratic Republic of Congo (DRC) uGermain Katanga.
Ulahlwe ngamacala ali-13 afaka phakathi ukusebenzisa izingane njengamasosha ezimpini, ukudala udlame emphakathini, ukudlwengula, ukubulala nokuzama ukubulala. Kube ngokokuqala ukuthi le Nkantolo ilahle umuntu ngamacala enziwa ngabanye abantu ayesebenzisana nabo. Abehluleli abathathu bale Nkantolo bavumelene ngokuthi amacala okudlwengula ayenziwa ngamasosha kaKatanga kumele athweswe yena ngoba babenezinhloso ezifanayo futhi kwakunguye umkhuzi wawo.
Abazwelana noKatanga bathi kukhona konke ukulahlwa kwakhe ngamacala wayevele eboshelwa amanqina enyathi yile Nkantolo. Bathi isigwebo sakhe samacala angaphambilini wasidonsa isigwebo sakhe.Bathi sekuphele iminyaka emithathu eboshiwe eKinshasa manje amacala asevuselwa wona babona egqugquzelwa ipolitiki. IDRC ibingaphansi kwengcindezi ye-ICC ukuba imshushise. Kusolwa ukuthi njengoba ezinikelile ezindlini zeNxusa lase-United States of America (USA) eDRC yingoba ummeli wakhe ubencengwa iziphathimandla kuHulumeni ukuze ehliselwe nesigwebo.
UKatanga owayehola iPatriotic Resistance Front of Ituri (FRPI) waziwa ngelika Simba okusho ibhubesi ngesiSwahili.NgoNdasa wezi-2014 wagwetshwa iminyaka eli-12 edonsa ejele ngamacala ezempi okwasala kuwo enkundleni abantu abangama-200 ngowezi-2003.Wagqunywa esitokisini kusuka ngowezi-2005, wadluliselwa eThe Hague ngoMfumfu wezi-2007, waphinde wabuyiselwa ezweni lakhe iDRC ngoZibandlela wezi-2015 ukuze aqedele isigwebo sakhe.
UNtaganda oneminyaka yobudala engama-45 kuthiwa nguyena owayengubhongoza emacaleni obugebengu ngokusho kwabehluleli abehlalele icala lakhe eThe Hague.Bekhipha isinqumo abehluleli athe ngalokhu athumela umyalezo nakwabanye abathinteka emacaleni ukuthi ingalo yomthetho yinde futhi basebenzisana nezinhloko zamazwe ukubabamba.